अमेरिकाको पूर्व कट्टर दुश्मन भियतनामले किन आयोजना गर्दैछ ट्रम-किम बैठक? | Rajmarga
सन् १९६५ मार्च महिनामा दक्षिणी भियतनामको डनअङ्ग शहरमा पहिलो अमेरिकी फौज ओर्लिएको थियो। दक्षिण-पूर्व एशियामा पूँजीवादविरूद्ध साम्यवादीको रक्तपातपूर्ण लडाइँमा संलग्न हुन उद्देश्यले त्यसो गरिएको थियो।
झण्डै ४४ वर्षपछि त्यही सहरले भियतनामको पूर्व शत्रु र उसको शीतयुद्धकालीन सहयोगी उत्तर कोरियाबीच सम्वाद योजना गर्न सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग आफ्नो दोस्रो बैठक फेब्रुअरी २७ र २८ मा भियतनाममा हुने पुष्टि गरिसकेका छन्। बैठक डनअङ्ग वा हनोइमा हुनसक्छ।
कम्युनिष्ट सत्ता भए पनि पूँजीवादी अर्थतन्त्र रहेको भियतनालाई अहिले वाशिङटन र प्योङयाङ दुवैले एउटा मित्र मान्ने गरेका छन्।
प्राध्यापक थाएरले बीबीसीलाई भने, “भियतनामले गर्ने ट्रम्प-किम सम्मेलन स्थलको छनोट प्रतीकात्मक मात्र छैन। सम्मेलनका निम्ति उच्च सुरक्षाको वातावरण उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमताको सबै पक्षले प्रशंसा गरेकाले भियतनाम छनोट भएको हो। सबै पक्षले भियतनाम तटस्थ आयोजक भएको ठान्छन्।”
थायर भन्छन्, “भियतनामको इतिहासमा अमेरिकाविरुद्धको युद्ध र कूटनीतिक सम्बन्धमा आएको सुधार, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता आदि सबै उत्तर कोरियाली सत्ताका निम्ति चासोका विषय हुन्।”
सिंगापुरको युसोफ इशाक इन्स्टिच्युटसम्बद्ध भियतनाम विज्ञ ले होङ हिएपले एफएपीसँग भने, “किम आफ्नै निम्ति भियतनामको कथा हेर्न इच्छुक हुनसक्छन्। उत्तर कोरियालाई अगाडि लग्ने बाटोबारे धारणा बनाउन उनको निम्ति त्यो राम्रो प्रेरणाको स्रोत र प्रतिबिम्व हुनसक्छ।”
ट्रमले भियतनाम स्वीकार गर्नुको कारण
Why does Trump agree on Vietnam?
‘समाजवाद उन्मूख बजार अर्थतन्त्र’ सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९८६ मा आर्थिक सुधार थालिएदेखि भियतनाम एसियाकै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने देशहरूमध्ये परेको छ।
प्राध्यापक थायरका अनुसार भियतनामले सहज अवस्था महसुस गरेको छ। उनी भन्छन्, “भियतनामको लामो समयदेखि सामूहिक विनाश गर्न सक्ने हतियारमाथिको प्रतिबन्ध र उत्तर कोरियाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा दिएको साथप्रति अमेरिका अनुग्रही छ।”
“कुनै बेला भियतनामले अमेरिकाविरुद्ध तरवार र बन्दुकको प्रदर्शन गरेको थियो तर अहिले उनीहरू मित्र छन्।”, प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था योनहापले लेखेको छ, “नयाँ इतिहास बनाउन अमेरिका र उत्तर कोरियाका निम्ति भियतनाम एउटा राम्रो स्थान हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ।”
Previous post: काठमाडौँकी एक महिलाको ५४ वर्षमा जुम्ल्याहा टेस्टट्युब बेबी
Next post: यस्ता छन् औषधि प्रयोग गर्दा ध्यान पर्ने कुराहरू